18-10-08 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
Qingdao Fitmax ကနျြးမာရေးနည်းပညာ Co. , Ltd မှ။ Oct.23-126,2018.It ရဲ့ရေကူးကန်နှင့်ရေချိုးနည်းပညာများအတွက်ညီလာခံနှင့်အတူရေကူးကန်များ, အပူပေးခန်းများနှင့် Spa မ်ားများအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားမျှတတဲ့အပေါ်ရှုပ်ထွေးစတုဂတ်တှငျကငျြးပခဲ့ပါလိမ့်မည်သည့် Interbad 2018 တက်ရောက်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ကဒီတရားမျှတတဲ့အရာက c ၌အကြှနျုပျတို့၏နောက်ဆုံးပေါ်, aqua ကြံ့ခိုင်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများကိုပြသပါလိမ့်မယ် ...
2018 Chongqing SPA ကုမ္ပဏီ SHOW
2018 တရုတ်အားကစား SHOW
2018 အာရှရေကူးကန် & SPA ကုမ္ပဏီ Expo 2018
2018 Tianjin SPA ကုမ္ပဏီ SHOW
2018 အရှေ့တရုတ် Fair
2017 တရုတ်အားကစား SHOW
2017 ပေကျင်းသည် SPA SHOW
aquafit ကြိုးစားရန်7အကြောင်းရင်းများ
18-09-17 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
အမျိုးမျိုးတက်ကြွအသက်တာ၏အမွှေးအကြိုင်, ဒါပေမဲ့ရာသီဥတုကအေးရရှိသွားတဲ့အခါ afitness မြိုင်ထဲသို့ကျဖို့အားလုံးကိုအရမ်းလွယ်ကူပါတယ်။ နောက်ဆုံးဆောင်းဦးရာသီငါသောက်ရကေူးမှမှန်မှန်ရေကန်ရရန်ကြိုးစားနေခဲ့ပေမယ့်ငါကိုရေ၌ဖြစ်ခြင်းကိုချစ်သော်လည်း, တကနည်းနည်း monotonous ခံစားရတော့တယ်။ ချထားသော, စိတ်ကူးတွင်ငါကြိုးစားကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ...
aqua ကြံ့ခိုင်ရေးအတွက်နှလုံးခုန်နှုန်းကိုတိုးပွားစေခြင်းနှင့်ရှည်လျားလုံလောက်စွာလူ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အခွအေနေအကျိုးခံစားရဖို့အောက်ဆီဂျင်ကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စားသုံးမှုတိုးပွါးကြောင်းမဆိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းအဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောလမ်းလျှောက်, ပြေး, ကခုန်, နှင့်ရေကူးအဖြစ်ဖျော်ဖြေရိုးရှင်းသောလှုပ်ရှားမှုများအေရိုးဗစ် exe လုပ်နေတာအဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါတယ် ...
ရေကူးကန်များထွက်အလုပ်လုပ်များစွာသောအကျိုးကျေးဇူးများကိုရှိပါတယ်။ ကရေကူးကန်ထဲမှာအေးနေဖို့လွယ်ပေမယ့်လေ့ကျင့်ခန်းသူ့ဟာသူအကြီးအကျယ်အခွင့်အရေးရှိပါတယ်မသာ။ အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှုပျမ်းမျှသုံးဆယ်မိနစ်ရေကူးကန်ယလေ့ကျင့်ခန်းမှန်းခြေ 300 ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်း: ဤတွင်အချို့သောအပိုဆောင်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုဖြစ်ကြသည်။ ဒါဟာ၏ဖျက်သိမ်းရေးကြာ ...
လွန်ခဲ့သောမေလကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမေလ 15-17 ရက်နေ့မှာကွမ်ကျိုးအတွက်အာရှရေကူးကန် Spa ကုန်စည်ပြပွဲများတွင်ပါဝင်ခဲ့နှင့်နှစ်ဦးကိုပြပွဲနှင့်သင်ယူမှုမှတဆင့်မေလ 25-28 ရက်နေ့မှာရှန်ဟိုင်းမှာရှိတဲ့တရုတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအားကစားကုန်စည်ပြပွဲများတွင်ပါဝင်ခဲ့။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီပိုပြီးရင့်ကျက်ဖြစ်လာသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျနော်တို့ပြည်တွင်း w ကွောငျးတှေ့ ...
ပူပြင်းနွေရာသီမှာတော့လေအေးစက်, ဖရဲသီး, ရေခဲ cola အပြင်, သင်တန်း, နွေရာသီဖျော်ဖြေရေး-ရှိရမည် - ရေနှင့်အတူဆော့ကစား! ရေနှင့်အတူကစားတဲ့အခါ, သငျသညျကြံ့ခိုင်ရေးသို့ရလိမ့်မယ် - "။ ရေကြံ့ခိုင်ရေး" အေး၏တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ကသင်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောကြံ့ခိုင်ရေးအီးဆောင်ခဲ့ဦးမည် ...
ရေအေရိုးဗစ်၏ထိပ်တန်း 10 ဦးကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ
ရေ, ရေနေရာတိုင်း! ရေ၌ထွက်အလုပ်လုပ်တဦးတည်းအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူနိုင်ပါသည်အရှိဆုံးကုထုံးလှုပ်ရှားမှုများတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေအေရိုးဗစ်အပေါငျးတို့သအဆစ်ပေါ်နှင့်တစ်ဦးအေးမြနဲ့အားမစိုက်ရလေထုထဲတွင်လွယ်ကူသောဖြစ်ခြင်းစဉ် cardio, အစှမျးသတ်တိနှငျ့ခုခံတည်ဆောက်! ဒီနေရာတွင်ကနျြးမာရေးကြံ့ခိုင်ရေးတော်လှန်ရေးတစ်ဦးအနေဖြင့်ထိပ်တန်း 10 ဦးရှိပါတယ် ...
ဘာကြောင့်လဲဒါလူကြိုက်များ-, aqua ကြံ့ခိုင်ရေးဖြစ်ပါသည်
aqua ကြံ့ခိုင်ရေးသို့မဟုတ် Aquagym, သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်တစ်ခုခုဖြစ်ဟန်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်မရှိတော့အများဆုံးကျိန်းသေကိစ္စတွင်ပါ! ဒါဟာအမှန်တကယ်သူတို့တစ်တွေရေကူးကန်လေ့ကျင့်ခန်း၏ဤအမျိုးအစားပူဇော်ရှိသည်ဘယ်မှာအလွန်ရေပန်းစားနှင့်များစွာသောကြံ့ခိုင်ရေးကျောင်းများဖြစ်လာသည်။ ဒါ့အပြင် ပို. ပို. ကျန်းမာစင်တာများနှင့် spa ဟိုတယ်များကြိမ်မြောက်ပူဇော်သက္ကာဘို့စတင်နိုင် ...
အဘယ်ကြောင့်ယောဂကိုရေ၌ သာ. ကောင်း၏ Is
သငျသညျယောဂပါဝင်ဆောင်ကြဉ်းနိုငျသောများစွာသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးခံစားခွင့်ကိုငါတို့သည်ကြားသိကြပေမည်, သို့သော်လူအများစုသင်ရေကူးကန်ရန်သင့်အလေ့အကျင့်ကိုယူတဲ့အခါမှာအပိုဆောင်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုရှိတယ်ဆိုတာကိုသိရပါဘူး။ ရေရန်သင့်ယောဂအလေ့အကျင့်မိတ်ဆက်ခြင်းသင့်ခန္ဓာကိုယ်အနာရောဂါကိုငြိမ်းစေ၏တစ်ဖွဲ့လုံးအသစ်ကလှိုင်းရခွင့်ပြု ...